Kylian Mbappé oo ka hadlay mustaqbalkiisa kooxda Paris Saint-Germain – Gool FM
(Paris) 13 Juun 2021. Weeraryahanka kooxda Paris Saint-Germain ee Kylian Mbappé ayaa diiday inuu ka hadlo mustaqbalkiisa, taasoo muujineysa inuu diirada saarayo ka qeyb qaadashada Koobka Qaramada Yurub ee EURO 2020, maadaama uu kala qeyb galayo xulkiisa France.
Qandaraaska Kylian Mbappé ee PSG wuxuu dhacayaa dhammaadka xilli ciyaareedka soo socda, wuxuuna xiiso weyn kaga imaanayaa Real Madrid inta lagu jir suuqan xagaaga, laakiin madaxweynaha kooxda Paris ayaa isbuucii hore sheegay in xiddigiisa reer France uusan sinaba iib u aheyn.
Mbappé wuxuu maalmo ka hor albaabka u furay dhammaan sheekooyinka la filayo ee ku saabsan mustaqbalkiisa, laakiin maanta wuxuu iska ilaaliyay inuu ka hadlo dib u cusbooneysiinta qandaraaskiisa gebi ahaanba, sida uu yiri markii wax laga weydiiyay arintaas, wuxuuna yiri:
“Qandaraas kordhin? Waxba igama galin hadda, waxaan halkaan u joogaa inaan matalo France, ma doonayo inaan foodo ka sameeyo kooxda.”
Kylian Mbappé ayaa sidoo kale beeniyay waxa ay qorayaan qaar ka mid ah saxaafada oo ku saabsan shuruudaha uu dejiyay si uu u ogolaado inuu u cusbooneysiiyo qandaraaskiisa, sida inuu codsaday in kooxda ay la soo saxiito ciyaartoy gaar ah.
Mbappé oo arrintan ka hadlayay ayaa wuxuu saxaafada u sheegay:
“Waan ka jawaabi doonaa, kama codsanin madaxweynaha ama Leonardo inay la soo saxiixdaan ciyaaryahan, waxaan ahay ciyaaryahan fudud oo kubadda cagta ah, diiradana waa inay ahaataa garoonka oo kaliya, marnaba ma weydiisan PSG hal ciyaaryahan.”